बुटवल– नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री डा. शशांक कोइरालाले मुलुकमा संघीयता आए पनि सरकारले केन्द्रिकृत शासन चलाएको आरोप लगाएका छन् । सरकराले प्रदेश र स्थानीय तहलाई प्रशस्त बजेट नदिँदा मुलुकमा संघीयताको आभाष हुन नसकेको बताए ।
आइतबार बिहान बुटवलमा आयोजना गरिएको एक साक्षात्कार कार्यक्रममा बोल्दै महामन्त्री कोइरालाले भने, ‘कम्युनिष्टहरू केन्द्रिकृत हुन्छन् भन्थे हो रहेछ । केपी ओली नेतृत्वको वर्तमान कम्युनिष्ट सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई दिनुपर्ने बजेट आफैं राख्यो । संघीयताको मर्म के हो बुझन सकेन ।’ कोइरालाले थपे, ‘दुई तिहाईको दम्भका कारण सरकार आफंै अलमलिएको छ । मुलुकलाई सही निकास दिन कांग्रेस ठूलो जिम्मेवारीका साथ संशक्त प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गरी अगाडि बढ्छ ।’ दुई तिहाईको सरकारसँग मुलुक बनाउने कुनै नयाँ योजना (भिजन) नै नभएको बताए ।
अबको सभापित कोइराला !
कार्यकताहरूको भावना बुझ्न देश दौडाहा निस्किएका महामन्त्री कोइरालाले आउँदो महाधिवेशनमा कोइराला परिवारमा एक जना सभापतिको उम्मेदवार बन्ने बताए । ‘विशेष गरी हामी तीन भाइ बहिनी शेखर, सुजाता र म बीच कुनै विवाद छैन’ कोइरालाले भने, ‘अबको दुई वर्षपछि हुने महाधिवेशनमा तीन जनामध्ये एक जना सभापतिको उम्मेदवार हुन्छौं ।’ कोइरालाले शनिबार नवलपरासीको कावासोतीमा भएको कार्यक्रममा पनि आफू सभापतिको बन्न इच्छुक रहेको धारणा कार्यकतामाझ राखेका थिए । मुलुक निर्माणमा बीपी कोइरालाको योगदान कसैले भुन्न नसक्ने उनको भनाइ थियो ।
कांग्रेसमा आन्तरिक द्वन्द्व छ
उनले कांग्रेसभित्रको आन्तरिक द्धन्द्धले पार्टी सही दिशामा अगाडि बढन नसकेको बताए । पार्टीभित्रको द्धन्द्ध समाधान गरी अब हामी अगाडि बढ्नुपर्छ । ‘कांग्रेसले मुलुकका लागि के गरेन । एउटामात्र विश्वविद्यालय रहेको मुलुकमा १२ वटा पुगे । ७ हजार किलोमिटर मात्र सडक रहेको मुलुकमा ८४ हजार पुग्यो । तर कांग्रेसले मुलुक निर्माणका लागि गरेको काम आफ्नै द्धन्द्धका कारण गरेजस्तो देखिएन । अब कांग्रेसभित्रको आन्तरिक द्वन्द्व समाधान गरी अगाडि बढनुको विकल्प छैन ।’ कोइरालाले भने ।
सरकारले प्रेसमाथि अंकुश लगाउन खोज्यो
महामन्त्री कोइरालाले वर्तमान सरकारले प्रेसमाथि अंकुश लगाउन खोजेको बताएका छन् । ‘मुलुकको चौथो अंक प्रेसमाथि हस्तक्षेप गर्न खोज्दै छ । स्वतन्त्र प्रेसका लागि पत्रकारहरूलाई खवरदारी गर्नुपर्छ’ उनले भने, ‘प्रेसमाथिको हस्तक्षेप कांग्रेसलाई स्वीकार्य छैन । त्यसको लागि प्रेस युनियनले खवरदारी गरोस् ।’ जनतालाई सुसुचित गर्ने सञ्चार क्षेत्रमा कांग्रेसले कसैसँग सम्झौता नगर्ने स्पष्ट पारे ।
जथाभावी बढाइएको करले जनता मारमा
स्थानीय तहले जथाभावी बढाएको करले जनता ठूलो मारमा परेको कोइरालाले बताए । उनले भने, ‘सरकारले जनतालाई साहत होइन । ऋण थप्यो । म जहाँ पुगेको छु । त्यहाँ जनताले गुनासो गर्छन, सरकराले ढाड नै सक्ने गरी कर बढायो । हामीले एमाले र माओवादीले मत दिएर गल्ती गरेछौ भने ।’ उनले कांग्रेसले जितेतका स्थानीय तहमा कर नबढाउन आफूले निर्देशन दिएको समेत बताए ।